Fanamarihana: ataovy an-tsoratra sy iaraha-miasa ny famokarana horonan-tsary
Alarobia, Aprily 30, 2014 Douglas Karr
Ny fanamarihana dia ahafahanao manasa ireo mpampiasa, hiara-miasa ary hanao an-tsoratra ny lahatsarinao. Azonao atao ny mampiasa ny serivisy fandraisam-peo na fampiantranoana misy anao toa Vimeo, Dropbox, Box, Youtube. Ny olona rehetra dia miasa amin'ny rohy manokana sy tsy manam-paharoa, ahafahanao mizara sy manome hevitra mivantana avy amin'ny ekipanao na ny mpanjifanao nefa tsy mila kaonty. Ny fanamarihana dia angonina miaraka amin'ireo sary mihetsika efa voatondro ao amin'ny efitrano fijerena. Azonao atao ny mandefa mivantana ireo fanamarihana ao anaty rindrambaiko fanovana horonan-tsary